MIUI Tip #Using Custom Fonts ( MIUI 9.5 and below ) – Xiaomi Guide
မိမိတို့ဆီမှာ ကိုယ်ပိုင်ရှိနေတဲ့ Font ttf file တွေကို MIUI 9.5 မှာ ထည့်သွင်းလို့ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးပါ။ 9.5 ဆိုတော့ သူ့အောက် version တွေမှာလဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ Mi Account ရှိထားရန်မလို၊ အင်တာနက်ဖွင့်ထားရန်မလိုပါ။ MIUI 9.5 မှာ ဘာလို့ခုလိုလုပ်လဲဆိုတော့ အရင်က ထည့်သွင်းခဲ့တဲ့ MIUI Theme Editor နဲ့လုပ်တဲ့နည်းက MIUI 9.5 မှာ Support မလုပ်တော့လို့ပါ။ MIUI Theme Editor update ကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့။ MIUI 9.5 မှာ apk လေးတွေပဲထည့်လို့ သူ့ထဲပါပြီးသား font တွေပဲ သုံးချင်ရင် သည် post [ –> Using Zawgyi Fonts in MIUI 9.5 <–] လေးကိုဖတ်ပြီး လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခုနည်းကတော့ ကိုယ့်ဆီ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် မြန်မာစာ ttf font file ရှိတယ်။ အဲဒါကိုမှထည့်ချင်တယ် ဆိုတာမျိုးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုလုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ app လေးကို Google Play Store မှာ တိုက်ရိုက်ဒေါင်းယူထည့်နိုင်ပါတယ်။
[ From Google Play Store ]
Play Store အဆင်မပြေရင် အောက်ပါ links များမှလဲ တိုက်ရိုက် download ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
App ကိုဖုန်းမှာ Install လုပ်လိုက်ပါ။ မိမိသွင်းချင်တဲ့ myanmar ttf font file လဲဖုန်းထဲရှိနေရပါမယ်။ App ကိုဖွင့်ပါ။ Browse Font ဆိုတာနှိပ်ပြီး Internal Storage ထဲမှာရှိနေတဲ့ မိမိတို့ font file ကိုလိုက်ရှာရွေးပေးပါ။ Themes -> Fonts ထဲမှာ မိမိတို့ပေါ်နေစေချင်တဲ့ နာမည်လေးကို ပေးပါ။
ကိုယ့် font ရဲ့ Preview image file လေးလုပ်မထားလို့ ခုနက Font နာမည်ပေးတဲ့နေရာမှာ Preview image နေရာ assign ပေးမထားရင် Preview Image မရှိဘူးလို့ ပေါ်လာပါတယ်။ Yes နှိပ်ပြီးသာဆက်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ဖုန်းထဲကို Install လုပ်ခိုင်းလိုက်ပါ။ ပြိးဆုံးပါက Font ချိန်းဖို့အတွက် နေရာပေါ်လာပါပြီ။
Font ချိန်းဖို့ဆက်ဝင်လိုက်ရင် မိမိတို့ နာမည်ပေး install ခဲ့တဲ့ Font name လေးပေါ်နေပါပြီ။ နှိပ်ရွေး၊ Apply လုပ်ရင် ဘာ checking မှလဲ လုပ်မနေပဲ Reboot လုပ်ခိုင်းတော့မှာပါ။
Default font နဲ့ Custom font ထည့်ထားတာကို အောက်ပါပုံလေးမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်လုပ်ပြီး Share ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ Simple Zawgyi Font file တွေနဲ့ Zawgyi Redefined Font file တွေကို ထည့်သွင်းလိုပါက ttf file ကို အထက်ပါနည်းနဲ့ထည့်သွင်းသုံးနိုင်ပါတယ်။
Download Simple Zawgyi Fonts ( 30 TTF Files )
Download Zawgyi Redefined Fonts ( 30 TTF Files )
Aung Kung San
Thank you very much. I got back mm font bcoz of that guidelines. I wish you to success more and help other more and more. Thank you.
Don’t have much free time for Xiaomi.. Anyway, be back soon 😀